ဘယ်လိုစားကြမလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ဘယ်လိုစားကြမလဲ
Posted by နွေဦး on Dec 30, 2012 in Community & Society, Society & Lifestyle | 40 comments
စားသောက်ခြင်း နွေဦး အမြင်
စားသောက်တော့မယ်ဆို ဘယ်လိုစားမလဲ လို့မေးရအုံးမယ် ။ကျွန်တော်တို့တတွေကတော့ လက်ဆေး ပုဂံယူ ထမင်းနဲ့ဟင်း သင့်သလို ထည့်ပြီး လက်နဲ့ အားရပါးရ နယ်စားလိုက် ပြီးတာဘဲပေါ့ ။ငပိရည် တို့စရာလေးတွေ မြှုပ်ထည့်ပြီး အားရပါးရလွှေးလိုက်ရရင် ဆွေမျိုးတောင်မေ့သွားသလားဘဲ ။ ဇလုံနဲ့နယ်ဖတ်စားရမယ်ဆိုရှယ်ပေါ့နော် ။
မြန်မာထမင်းဝိုင်းက တို့စရာနဲ့ ငပိရည်
ဒါပေမဲ့ ခေတ်ကပြောင်းနေပြီဗျာ…။အရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူး ။ဘယ်သူမဆို နိုင်ငံအကြီးအကဲ ဖြစ်နိုင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ စနစ်နဲ့ နိုင်ငံဖြစ်လာပြီလေ ။ ဒီတော့ ကံကောင်းအကြောင်းလှလို့ နေရာတစ်နေရာမှာ လူကြီးဖြစ်လာပါပြီတဲ့ …သူ့အဆင့်နဲ့သူ ညစာစားပွဲတွေ ဧည့်ခံပွဲတွေ တက်ရမယ် လူကြီးလူကောင်းတွေနဲ့ အတူတူ စားရသောက်ရတော့မယ်ဆို အိမ်မှာလို ထမင်းကို လက်နဲ့ အားရပါးရ နယ်ဖတ်ပြီး စားလို့မရတော့ဘူးလေ ။ မှင်နဲ့မောင်းနဲ့ အိနြေ္ဒရရ စားသောက်ရတော့မှာပါ ။
နိုင်ငံရပ်ခြားတိုင်းပြည်တွေကို အလည် ရောက်ဖို့ဆိုတာလဲ ဒီနေ့ဒီအခါမှာ လွယ်သွားပါပြီ ။ဟိုရောက်တဲ့အခါ မိတ်သစ်ဆွေသစ်တွေက ဧည့်ခံကျွေးမွေးဘို့ဖိတ်လာတဲ့အခါမျိုးတွေရှိလာနိုင်ပါပြီ ။ ဟိုတယ်တွေ ရက်စတောရင့်တွေမှာ ဖိတ်ပြီးဧည့်ခံတော့မှာ ။ အဲဒီတော့ ဒီလိုပွဲတွေမှာ ဘယ်လိုစားသောက် နေထိုင် ရမယ် ဘာတွေ ဆောင်ပြီးဘာတွေရှောင်ရမယ် ဆိုတာတွေ သိမိဖတ်မိသလောက်လေး ဖောက်သည်ချပေးပါရစေ ။
ပထမ သိရမဲ့အချက်ကတော့ ကိုယ့်ကို ဖိတ်တဲ့ ညစာစားပွဲ အမျိုးအစားပေါ့ ။
သာမန်အားဖြင့်တော့ formal dinner (အခမ်းအနားနှင့်လုပ်သော ညစာစားပွဲ) နဲ့ informal dinner (အလွတ်သဘော ပြုလုပ်သော ညစာ စားပွဲ) ဆိုပြီးခွဲခြား သတ်မှတ်လေ့ရှိပါတယ် ။ပြီးတော့ ဘယ်လို စတိုင်နဲ့ ကျွေးမှာလည်းဆိုတာ (ဥပမာ Continental /European style နဲ့ American style ) သိထားဘို့လဲလိုပါသေးတယ် ။
Continental style ဆိုရင် dinner knife ကိုညာလက်နဲ့ ခက်ရင်းကို ဘယ်လက်နဲ့ ကိုင်ပြီး အသား/ပေါင်မုန့်ကို တကိုက်စာ အတုံးလေးကိုလှီးပြီး ခက်ရင်းနဲ့ထိုးပြီး ပါးစပ်ထဲကို တိုက်ရိုက်ထည့်လို့ စားရပါတယ် ။
American style ဆို ညာလက်က dinner knife နဲ့ အသား/ပေါင်မုန့်လှီးတဲ့အခါ ဘယ်ဘက်လက်က ခက်ရင်းနဲ့ တကိုက်စာ အစလေးတွေကို လိုက်ထိမ်းပေးရပါတယ် ။ တခါလှီးဖြတ်ရင်လည်းတစ်ကိုက်စာ နှစ်တုံးထက်ပိုမဖြတ်သင့်ပါ ။ပြီးမှ ညာဘက်လက်က ဒါးကို ပန်းကန်ပေါ်ချပြီး ဘယ်ဘက်လက်က ခက်ရင်းကို ညာလက်နဲ့ ပြောင်းကိုင်ပြီးမှ တကိုက်စာ အတုံးလေးတွေကို ဖြည်းဖြည်းချင်းစားရပါတယ် ။ ဒါးကို ပန်းကန်ပေါ်ချတဲ့အခါမှာလည်း ဒါးသွားကို ကိုယ့်ဖက် လှည့်ချရပါမယ် ။လှီးနေဖြတ်နေတဲ့အချိန်မှာ သင့်လက်တွေ ကားမထားဘဲ တံတောင်ဆစ်တွေကို သင့်ကိုယ်နဲ့ ကပ်ထားပေးပါ ။
ဇွန်းခက်ရင်းဒါးတွေကို စားသောက်နေရင်းဆော့ကစားတာမျိုးမဖြစ်အောင် သတိပြုပါ ။စကားပြောနေချိန် ဇွန်းခက်ရင်း စတာတွေကို လက်ထဲကိုင်မထားပါနှင့် ။ ဇွန်းခက်ရင်း စတာတွေနဲ့ လေထဲဝှေ့ရမ်းပြီးညွှန်ပြတာမျိုးလဲမလုပ်ရပါဘူး။
သိပ်ကြီးကျယ်တတ်တဲ့ သူတွေဆိုတော့ ဇွန်းခက်ရင်း ဒါးကိုင်တာကအစ သူ့စနစ်နဲ့သူသတ်မှတ်ထားတော့ သတိပြုရမဲ့အချက်တွေများပါတယ် ။
နောက်တခုက အဝတ်အစား ဆင်ယင်မှု ကလည်းသတိပြုရပါသေးတယ်။သတ်မှတ်တဲ့ ဝတ်စုံရှိခဲ့ရင် စနစ်အတိုင်းပုံစံပြည့် ဝတ်ရပါတယ် ။ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မဆီလျှော်တဲ့ အဝတ်အစားမျိုး မဝတ်မိဖို့ ဂရုပြုပါ။
ဖိတ်ကြားခံရတဲ့အခါ တက်ရောက်နိုင်ခြင်းရှိမရှိ ကို အမြန်ဆုံး (တတ်နိုင်ရင် ၃ရက်အတွင်း )အကြောင်းပြန်ပေးရပါတယ် ။
မိမိနဲ့အတူ လူပိုခေါ်ခွင့်ရှိမရှိကို ဖိတ်ကြားသူနဲ့ ညှိနှိုင်း ခွင့်ပြုချက်တောင်းရပါတယ် (ဒါက informal dinner မှာသာ လုပ်သင့်ပါတယ်)။မိမိသဘောနဲ့တော့ ခေါ်မသွားသင့်ပါဘူး ။
ဖိတ်ကြားထားတဲ့အချိန်ထက် ၁၀မိနစ်ထက်ပိုမစော ၁၀မိနစ်ထက်ပိုပြီးနောက်မကျစေရန်အထူးဂရုပြုရပါမယ် ။
အရေးကြီးတာတခုက လက်ဆောင်သေးသေးလေးဖြစ်ဖြစ်(ပန်းစည်း .ချော့ကလက်ဘူး .ရှမ်ပိန် .ဝိုင် စတာမျိုး)ဝယ်သွားပေးဖို့မမေ့ပါနှင့် ။
ထမင်းစားပွဲမှာ မထိုင်ခင်နှင့် စားသောက်နေချိန်အတွင်းမှာ သင့်ရဲ့ Hand phone ကို ပိတ်ထားဖို့မမေ့ပါနှင့် ။
ထမင်းစားပွဲမှာ မထိုင်ခင် ကိုယ့်စားပွဲမှာ ထိုင်ကြမဲ့ သူများထက်အရင်မထိုင်မိဖို့သတိပြုပါ ။ဖြစ်သင့်တာက ကိုယ့်ကိုဖိတ်တဲ့သူက ထိုင်ဖို့ ပြောပြီးသူထိုင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ ထိုင်ရပါမယ် ။စားပွဲတခုထည်း အမျိုးသမီးများအတူတူပါမယ်ဆိုရင် သူတို့ထိုင်ပြီးမှထိုင်သင့်ပါတယ် ။ အမျိုးသမီးတဦးဦး အပြင်သွားဖို့ ထိုင်ရာမှထခဲ့လျှင် မိမိလည်းထရပ် ရပါမယ် ။ ပြန်လာပြီးထိုင်တော့မယ်ဆိုရင်လည်း မိမိမှ ထရပ်ပြီးကြိုရပါမယ် ။
စားပွဲမှာ ထိုင်ပြီး ခဏမှာဘဲ စားပွဲပေါ်မှာရှိတဲ့ လက်သုတ်ပုဝါ (napkin) ကိုယူပြီး တဝက်လောက်ဖြန့်ပြီး ပေါင်ပေါ်မှာ လွှမ်းထားရပါမယ် ။လုံးဝဖြန့်တင်ထားတာမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူး ။ ရင်ဘတ်ကြားသွားရည်ခံထားသလိုမျိုး ဘောင်းဘီခါးပတ်ကြားထိုးတာမျိုးလည်း မလုပ်ရပါဘူး ။ ထိုင်ခုံက ခဏတဖြုတ် ထသွားမယ်ဆိုရင် လက်သုတ်ပုဝါကို ထိုင်ခုံပေါ်ချသွားရပါမယ် ။ စားပွဲပေါ်တင်မသွားရပါဘူး။ထိုင်ခုံပေါ်ချသွားတဲ့အတွက် သင်ပြန်လာမယ်လို့ ဆိုလိုရာရောက်ပါတယ် ။ စားသောက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကြမှ လက်သုတ်ပုဝါကို အလျှားလိုက်လေးခေါက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ ပန်းကန် ဘယ်ဘက်နေရာမှာတင်ခဲ့ရပါမယ် ။
စားပွဲမှာထိုင်ပြီးပြီဆိုရင် ကိုယ်ကို မတ်မတ်ထိုင်ရပါမယ် ။ထိုင်ခုံနောက်မှီလှန်ပြီးထိုင်တာမျိုးမလုပ်ရပါ ။ စားပွဲပေါ်ကို ကိုင်းငိုက်ပြီးလည်း မထိုင်ရပါ ။ လက်နှစ်ဘက်ကို မိမိပေါင်ပေါ်တင်ပြီးထိုင်သင့်ပါတယ် ။ ထမင်းစားပွဲပေါ် တံတောင်ဆစ်ထောက်ပြီး မေးထောက်ပြီး လုံးဝ မထိုင်ရပါ ။ လက်ဖဝါးများစားပွဲပေါ်တင်၍ ထိုင်နိုင်ပါသည် ။ စားပွဲခုံကို လက်ဖြင့်ခေါက်ပြီး စန္ဒယားတီးသလို စည်းချက် လိုက်နေခြင်းမျိုးလုံးဝမလုပ်ရပါ ။
စပြီးစားကြတော့မယ်ဆိုရင် သူများတွေစပြီးစားတဲ့အခါမှသာ စပြီးစားသင့်ပါတယ် ။ အိမ်ရှင်က စားပါလို့ပြောတဲ့အချိန်ကို စောင့်ပါ ။တချို့ဒေသတွေမှာ စားသောက်ခြင်းမပြုမှီ ဆုတောင်းတာတွေရှိတာမို့ အရင် မစားမိအောင် ဂရုပြုကြရပါမယ် ။
သင့်အတွက် သင့်ရှေ့မှာခင်းထားတဲ့ ပန်းကန်တွေ ဇွန်းခက်ရင်းတွေကို သတိပြုပါ ။ သောက်စရာ ရေခွက် ဝိုင်ခွက် စတာတွေဟာ သင့်ညာဘက်မှာ ရှိပါတယ် ။စားစရာတွေ ပေါင်မုန့် ထောပတ် တွေဟာ သင်ရဲ့ ဘယ်ဘက် မှာရှိပါတယ် ။ သူတပါး ရေခွက် ပေါင်မုန့်တို့ကို မှားစားမိတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနှင့် ။
စားသောက်ဖွယ်ရာများကို လက်ဆင့်ကမ်းလျှင် ညာဖက်သို့ ပေးရပါမယ် ။
ပေါင်မုန့်ခြင်းကို ညာဖက်သို့ လက်ဆင့်ကမ်းပါ။
ဘယ်ဖက်မှကမ်းပေးလာသော စားသောက်ဖွယ်ရာများကို မိမိအတွက်ထည့်ယူပြီးက ညာဖက်သို့ကမ်းပေးရမည် ။ စားစရာထည့်တဲ့ ဇလုံ သို့မဟုတ် ပေါင်မုန့်ထည့်ထားတဲ့ ခြင်းတောင်း စတာတွေကို သင့်ရဲ့ ဘယ်ဖက်မှ လက်ဆင့်ကမ်းလာပါမယ် ။ခြင်းသို့မဟုတ် ဇလုံကို ကမ်းမယူမှီ သင့်အတွက် စားမဲ့ ပေါင်မုန့် ဒါမှမဟုတ် စားစရာကို သင့်ပန်းကန်ထဲသို့ အရင်ခပ်ထည့်ရပါမယ် ။ပြီးမှ ခြင်း ဒါမှမဟုတ် ဇလုံကို လက်ဆင့်ကမ်းယူပြီး ညာဖက်သို့လက်ဆင့်ကမ်းပေးရပါမယ် ။ညာဖက်မှသူကလည်း သူ့အတွက် အရင်ခပ်ယူပြီးမှ သင့်လက်ထဲက ခြင်းကို ကမ်းယူပါလိမ့်မယ်။
အစားအစာတွေကို မမြည်းကြည့်ခင် ဆား ငြုပ်ကောင်း စတာတွေကို မဖြူးထည့်မိပါစေနှင့် ။
အစားအသောက်ကို ခေါင်းငုံ့ပြီးမစားပါနှင့် ။ ခန္ဓာကိုယ်ခပ်မတ်မတ် အနေအထားနှင့်ဇွန်းခက်ရင်းဖြင့် စားစရာကိုပါးစပ်ဆီသို့ ယူ၍စားပါ ။
တတ်နိုင်သမျှ ပါးစပ်ပြည့်အောင် ပလုပ်ပလောင်း မစားပါနှင့် ။ ပါးစပ်ပိတ်ပြီး အစာကိုဝါးစားပါ။တပြပ်ပြပ် မမည်ပါစေနှင့် ။ ပါးစပ်အတွင်း အစာရှိနေချိန် စကားလုံးဝမပြောပါနှင့် ။ နှာချေခြင်း ချောင်းဆိုးခြင်း တံတွေးသလိပ်ဟပ်ခြင်း စတာတွေကို လုံးဝမလုပ်မိပါစေနှင့်။ အစာဝါးစားနေစဉ်အတွင်း အရည်တမျိုးမျိုးကို မသောက်ပါနှင့်။ပါးစပ်အတွင်းမှ စားစရာကုန်မှ ရေသို့မဟုတ် အချိုရည် စသည်တို့ကိုသောက်ရပါမယ် ။
စားသောက်နေစဉ် ဇွန်းခက်ရင်း လွတ်ကျ ပြုတ်ကျခဲ့ရင် ကောက်ပြီးပြန်သုံးရန်စကြိုးစားပါနှင့် အသစ်တောင်းယူပါ။ ဟင်းဖိတ်စင်သွားသည်များကို ကိုယ်တိုင် သုတ်သင်ခြင်းမလုပ်ဘဲ စားပွဲထိုးအားခေါ်ပြီးခိုင်းပါ ။မိမိကြောင့် လွတ်ကျတာ စွန်းပေတာတွေဖြစ်ခဲ့ရင် တောင်းပန်ပါ ။တောင်းပန်ဖို့ဝန်မလေးပါနှင့် ။
အရိုးများ မစားချင်သော အကြွင်းအကျန်များကို စားပွဲပေါ်တင်မထားပါနှင့် ။မိမိမကြိုက်သောစားစရာများပါလာခဲ့လျှင် အနည်းငယ်စားပြီး ဟန်မပျက် ဘေးချထားရပါမည် ။မိမိနှင့်အတူစားသောက်နေသူတို့ကို အနှောက်အယှက်မဖြစ်ပါစေနှင့် ။
salt တောင်းလျှင် pepper ပါတွဲ၍ ပေးရသည့် ထုံးစံရှိပါသည် ။တောင်းယူသည့်အခါ ကျေးဇူးပြုပြီး (please ) ကိုသုံးရပြီး လက်ခံရပြီးလျှင် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် (thank you) ဟုပြောရန်မမေံပါနှင့်။ ကျေးဇူးပြုပြီး (please ) , ကျေးဇူးတင်ပါတယ် (thank you), ခွင့်ပြုပါ (excuse me) , စတာတွေကိုသုံးဘို့မမေ့ပါနှင့် ။
မိမိဟာ အစားအသောက်နှေးတဲ့သူ ဖြစ်တယ်ဆိုရင် သူများတွေနဲ့အမှီလိုက်စားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ ။အခြားအစားနှေးသူပါခဲ့လျှင်လည်း ထိုသူကို စောင့်စားပါ။အခြားသူတွေ စားသောက်ပြီးစီးနေပါက မိမိစားလက်စအား အမြန်အဆုံးသတ်လိုက်ပါ။
စားသောက်ပြီးတဲ့အခါ မိမိစားသုံးခဲ့သည့် ဒါး နှင့် ခက်ရင်း ကို ပူးတွဲပြီး ပန်းကန်ပေါ်မှာ ညာဖက် မှ ကန့်လန့်စောင်းစောင်းတင်ပြီး ထားခြင်းအားဖြင့် မိမိစားသုံးပြီးကြောင်း သိစေပါတယ် ။
စားသောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ စားသောက်ဖွယ်ရာများ အရသာရှိကြောင်း စားသောက်၍ ကောင်းကြောင်းပြောဖို့မမေ့ပါနှင့် ။
စားသောက်နေဆဲသူများရှိနေချိန်တွင်မိမိစားပြီး၍ စားပွဲမှ ထွက်မသွားပါနှင့် အားလုံးစားပြီးသည်အထိစောင့် ပါ။
ထမင်းစားနေစဉ်အချိန်မှာ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း သွားကြားထိုးခြင်း နှာခေါင်းကုတ်ခြင်း ခေါင်းကုတ်ခြင်းများ လုံးဝမလုပ်ရပါ။
တချို့စားသောက်စရာများဟာ လက်နဲ့ ကိုင်စားရတာမျိုးရှိပါတယ် ။ ဒီအခါမျိုးမှာ လက်ညှိုး လက်ခလယ် လက်မ စတဲ့ လက်ချောင်းသုံးချောင်းနဲ့သာ ကိုင်ပြီးစားရပါတယ် ။ လက်ချောင်းတွေကို ပါးစပ်နဲ့စုပ်စားတာမျိုးမလုပ်ရပါ ။အမြဲတန်းညာလက်ကို အသုံးပြုပါ ။
စားသောက်ပွဲပြီးလို့ စားပွဲမှ ထွက်ရာတွင်လည်းအများနှင့်အတူ ထပြီးထွက်ပါ ။နောက်ချန်နေခဲ့ခြင်းမျိုးမပြုရပါ (မိမိသည် ဖိတ်ကြားခံရသည့်ဧည့်သည်ဖြစ်လျှင်) ။စားသောက်ခန်းမှမထွက်ခွာမှီ မိမိအားဖိတ်ကြားသည့် အိမ်ရှင်ကို နှုတ်ဆက်ရပါမည် ။ ဧည့်သည်များလွန်းသဖြင့် အိမ်ရှင်အား နှုတ်ဆက်ရန်မဖြစ်နိုင်က နောက်တနေ့မနက်တွင် တယ်လီဖုန်းဖြင့် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း မဖြစ်မနေ ပြောရပါမယ် ။
ဒီလို ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေး ညစာစားပွဲတပွဲကို ဂုဏ်သရေရှိရှိ စားသောက်နိုင်ဖို့ လွယ်လွယ်ကူကူ လေ့လာနိုင်အောင် သိသလောက် ပြောပြရတာပါ ။ ကျန်တာလေးတွေလည်းရှိနိုင်သလို မလိုက်နာဘဲ ချန်ထားခဲ့လို့ရတာတွေလည်းရှိမှာပါ ။ ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် အိနြေ္ဒ မပျက် စားသောက်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ် ။
မှတ်ချက် ။ ။ ကြိုတင်လေ့ကျင့် စားသောက်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် ဟော်တယ်ကြီးများတွင်အဖေါ်အဖြစ် လိုက်ပြီးစားသောက်ပေးနိုင်ပါတယ် ။
ဟို ခြောက်မျက်နှာကတော့ ကြုံသလိုတွယ်တာ
ဦးမာဃတို့က စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ စားမှာ
အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
ဝုတ်ဒယ် .. ဝုတ်ဒယ် …
အပေါ်ဂ ဥမာဃ ကြောဒလိုဘဲ …
ကျုပ်က ကြုံဒလို တွယ်ဒါ …..
ကျုပ်က အပေါ်မှာ ပြထားသလို …
ဒါတွေ ဘာတွေနဲ့ စားရ သောက်ရတာကို ကြိုက်ဖူးရယ် …..
လက်နဲ့ ကိုင်စားလို့ ရတဲ့ဟာဆို လက်နဲ့ ကိုင်ပြီး စားပစ်လိုက်တာပဲ ….
ဇွန်း ခက်ရင်းလောက်ကတော့ ဖြစ်ပါတယ် …
ဟိုဒင်းတွေ ပါလာရင်တော့ ဖြစ်တော့ဘူး ….
ဘာပဲပြောပြော ဗိုက်ထဲ ရောက်ဖို့ အဓိက ကျသလို …
ဗိုက်ထဲ ရောက်ပြီးတော့လည်း ဟိုဒင်းထဲပေါ့ဗျာ … တကယ်တွေးကြည့်ရင် ရိုးရိုးလေးပါ …
ကျုပ် သမ္မတ ဖြစ်တဲ့အခါ ကိုနွေဦးရဲ့ ဒီပို့စ်လေးကို …
တခုတ်တရ ပြန်လာပြီး ကွန်မန့် ပေးပါအုံးမယ်လို့ ….
လူတိုင်းဖြစ်နိုင်ခွင့်ရှိနေတဲ့ အချိန်အခါမို့ ကျွန်တော့် ပိုစ် လေးကို တခုတ်တရ ပြန်ပြီးကွန်မန့် ပေးမဲ့အချိန်ကို ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစောင့်နေပါတယ် ။
မဲထည့်ဖို့လိုအပ်ရင်လည်း အပြည့်အဝထောက်ခံပေးပါ့မယ် ။
မောင်ပေ အက် ဂျီမေးလ် ဒေါ့ကွန်းကို ကွန်နက်လုပ်ပေးပါနော
သင်ပေးချင် ကျွေးချင်ပါရဲ့ သို့ပေမဲ့ ပေးရမဲ့ကိစ္စကတော့ အမေမှာထားတယ် “စဉ်းစားပါသားရယ်”တဲ့။
ဟိုးးးး တုန်းက ဖတ်ဖူးတဲ့ ဘာသာပြန်တစ်ပုဒ်မှာ ဆင်းရဲတဲ့ဘ၀ကနေ နေ့ချင်းညချင်း ချမ်းသာသွားတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို လူကြီးလူကောင်းဆန်ဆန် စားသောက်နေထိုင်နည်းတတ်အောင် ဆရာခေါ်သင်ရတယ်တဲ့။
ခုနောက်ပိုင်း ဖက်ရှင်တွေ စတိုင်တွေ ခေတ်စားလာတော့ အဲလို သင်တန်းမျိုးတွေ ကြားဖူးပေမယ့် တက်ချင်ပေမယ့်အချိန်အခါ အခြေအနေအရ မတက်ဖြစ်ဘူး။
ခုတော့ နွေဦးကျေးဇူးကြောင့် သိသွားရပြီ။
မှတ်တော့ အတော် မှတ်ယူရအုံးမယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခုလို ဘယ်မှ မသွားရပဲ၊ ဘာကုန်ကျမှုမှ မရှိပဲ သိခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ :hee:
ဟိုတုန်းက My Fair Lady ရုပ်ရှင်ကားမှာကြည့်ဖူးသလိုဘဲ။
နောက်ပိုင်းခေတ် ရုပ်ရှင်တကားလည်းကြည့်ဖူးပါတယ် သိပ်တော့မှတ်မိတော့ပါဘူး။
နွေဦး ရေ ။
သေချာ စုစည်းပေးထားတာပဲ ။ ဗဟုသုတ ရပါပေတယ် ။
တစ်ချို့ ထပ်ဖြည့်ပေးရရင်တော့ ၊
၁ ။ ဇွန်း ခက်ရင်း ဒါး တွေကို ဘယ်လိုသုံးရမှန်း မသေချာရင် ၊
အပြင်ဖက်ဆုံးက ဇွန်း ခက်ရင်း ဒါး တွေကို အရင်သုံးရပါမယ် ။
ဟော်တယ်တွေကလည်း အဲဒီ အစဉ် အတိုင်းပဲ စားစရာတွေကို လာချပေးပါလိမ့်မယ် ။
၂ ။ စားစရာတွေ တစ်ပွဲပြီး တစ်ပွဲ လာချတဲ့အခါမှာ ၊
ကိုယ်က အသိမ်းမခံချင်တဲ့ ထပ်သုံးစရာရှိသေးတဲ့ ( ဥပမာ ဇွန်း ) ကို ၊
ဇွန်းထားတဲ့ စားပွဲခင်းပေါ်မှာ ပြန်တင်ထားပါ ။
သူတို့ရဲ့ စားပွဲခင်းတွေက သန့်ပါတယ် ၊ စိတ်မပူပါနှင့် ။
နို့မို့ရင် တစ်ပုဂံပြီးလို့ ပုဂံ နှင့် ဇွန်း ခက်ရင်း တွေ လာသိမ်းတဲ့အထဲ ပါသွားရင် ၊
နောက် တစ်ပုဂံမှာ ဇွန်း ထပ်လိုချင်ရင် မရှိတော့ပါဘူး ။
စိတ်မပူပါနှင့် ၊ အဖြူတွေလည်း အဲလိုပဲ လုပ်ကြပါတယ် ။
၃ ။ ကျနော်ကတော့ အက္ခရာ အစဉ်အတိုင်းလေး မှတ်ထားတယ်ဗျ ။
အက္ခရာ အစဉ်အတိုင်းလေ ၊ Bread / Butter & Drink မှာ ၊ B က ဘယ်ဖက် ၊ D က ညာဖက် ။
Folk & Knife / Spoon လဲ ဒီအတိုင်းပဲလေ ။ F က ဘယ်ဖက် ၊ K / S က ညာဖက်လေ ။
၄ ။ တကယ့်တကယ်မှာက ပုဂံပြား ရဲ့ ရှေ့ဖက် / အပေါ်ဖက် မှာလည်း ၊
ဇွန်း ခက်ရင်း ဒါး တွေ ထားလေ့ရှိသေးတယ်ဗျ ။
Salad တို့ ၊ Ice Cream တို့ ထင်တယ်ဗျ ( နာမည် သိပ် မသေချာ ပါ ) ။
လိုအပ်တာလေးတွေကို ထပ်ဖြည့်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ပို့(စ) ရော ဘဖောရေးထားတာရော ကူးသွားတယ်။
အာပါးပါး မနဲကြိုးစားတင်ရတာ အဲလို သပ်ရပ်ဖို့ ။
ဒါတောင် ပုံတချို့ ကျန်ခဲ့သေးတယ် ။နောင်ပိုကောင်းအောင်ကြိုးစားပါ့မယ်။
ဗဟုသုတ ရဖွယ်အရေးအသားကို ပုံလေးတွေနဲ့မို့ ကောင်းတယ်ဗျ။
အဘဖောက ထပ်ဆင့်ကွန်မန့်ဖြည့်လိုက်တော့ ပိုကောင်းသွားတာပေါ့ဗျာ။
တစ်ကယ်ကောင်းတဲ့ Post ပါ…ဒီလိုမျိုး Post ကလိုလည်းလိုအပ်ပါတယ်..မောင်အံစာပြေသလိုဘာပဲပြောပြော ဗိုက်ထဲ ရောက်ဖို့ အဓိက..ကိုယ်အိမ်ထဲမှာ လက်နဲ့မကလို့ ဘာနဲ့ပဲစားစား..ဒါပေမယ့် တစ်ချို့နေရာတွေမှာ Etiquette လေးတွေထားရမယ့်နေရာတွေရှိတယ်..
အဲဒီ etiquette အကြောင်းလဲ ရေးပါအုံးမယ် ။ကျေးဇူးပါ။
နောက်တခါ လူ့ကျင့်ဝတ် etiquette အကြောင်းလဲ ရေးပါအုံးမယ် ။ကျေးဇူးပါ။
တကယ်လိုအပ်တဲ့ လူမှူရေးအသိပညာတွေပါဗျာ ဖတ်သင့်ပါ၏မှတ်သင့်ပါ၏
မင်္ဂလာပါ ကိုနွေဦးရေ …
လူတွေနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတဲ့ လူတိုင်း(သိပြီးသူတွေမပါ) မဖြစ်မနေဖတ်သင့်တဲ့ ပို့စ်လေးမို့ သဘောကျ နှစ်သက်မိပါတယ် ။ အသက်အရွယ်အရရော ၊ လုပ်ငန်းခွင် အနေအထားအရပါ ပတ်သတ်ဆက်နွယ်ရတဲ့ လူတွေများလာတဲ့အခါ ၊ မဖြစ်မနေ လိုက်နာ ကျင့်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ် ။
ပို့စ်က အရမ်းကောင်းသလို ၊ အဘဖောရဲ့ အားဖြည့်ထားတဲ့ကော့မန့်ကလည်း ဗဟုသုတရစေပါတယ် ။
မှတ်မှတ်ရရ ကျွန်မအလုပ်ခွင်စ၀င်တော့ ၊ ရုံးက လူမျိုးခြား ဂျီအမ်တို့နဲ့ စားကြသောက်ကြရင်း အရက်ငှဲ့ပေးတဲ့အခါ ဘယ်လိုအနေထားနဲ့ ယူလိုက်မိလည်းမသိဘူး … (ကိုယ်ကတော့ မမှတ်မိဘူး ) နောက်ပိုင်း ဂျီအမ်က အမြဲသင်ပါတော့တယ် ။ စားပွဲပေါ်က ခွက် ၊ ပုဂံ ၊ဇွန်း ၊ခရင်း အနေထားတင်မကပဲ ၊ ကိုယ်အမူရာနဲ့ မျက်နှာ အမူရာကပါ အတူ ထိုင်စားသောက်နေတဲ့ တဖက်လူကို စော်ကားသလို မဖြစ်စေဖို့ ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို etiquette မရှိတဲ့ အသွင်မဆောင်ဖို့ အလေးထားပြောပြပေးရှာတယ် ။ အဲ့ဒီတော့မှ ၊ ဒီလိုနေရာတွေမှာ ဒီလို အလေ့ထတွေ အရေးစိုက်ကျင့်သုံးသင့်ပါလားဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးရခဲ့ပါတယ် ။
လုပ်ငန်းသဘောအရ ပတ်သတ်ဆက်နွယ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဂျာမန်လူမျိုးတစ်ယောက်ကလည်း ၀ိုင်ခွက်ကိုင်တဲ့ လက်အနေထားနဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကွဲပြားပုံအကြောင်းလည်း ဗဟုသုတအနေနဲ့ ပြောပြခဲ့ဖူးတယ် ။
ဗဟုသုတရစေတဲ့ ဒီလို ပို့စ်လေးတွေ များများရေးပါလို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်နော် ။
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ ။
အနောက်တိုင်းကသူတွေကတော့ သူတို့စနစ်ကို လိုက်နာမှ ကြိုက်တဲ့ပုံဘဲ ။အဲ ဂျပန်တွေနဲ့ တွေ့တော့ သူတို့ စားချင်သလိုစားတဲ့အပြင် တခြားလူတွေကိုပါ အဖေါ်ညှိတတ်ကြသေးတယ်.. ။
အေးဗျာ..သူတို့ရဲ့ စားသောက်ပွဲ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ သိ့လိုက်ရတော့ ကျနော်တို့ မြန်မာလူမျိုး တွေရဲ့ စားသောက်ပွဲ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလေးတွေ ကိုရော သူတို့ ကိုသိ့စေ့ချင်လိုက်တာဗျာ…(ဒါနဲ့ ကျနော်တို့မြန်မာတွေရဲ့ စားသောက်မှု့ပုံစံ ယဉ်ကျေးမှု့ကရော ဘာတွေလဲဗျ နားလည်တဲ့ နောင်တော်တို့ အစ်မတော်တို့ ပြောပြပေးပါ့လားဗျာ ဗဟုသု့တ ပေါ့)
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ မြန်မာတွေရဲ့ အားရပါးရထမင်းဝိုင်း ကိုလဲ ရေးနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါ့မယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
ပွဲလမ်းသဘင်တွေ တက်ရောက်ရတာနဲ့ ပတ်သတ်လို့ အခုလို အခက်အခဲတွေဟာ
အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ လူတွေအတွက် အင်မတန်ဒုက္ခရောက်ပါတယ်ခင်ဗျ။
စမတ်ကျကျ တက်နိုင်ဖို့ စားနိုင် စကားပြောနိုင်ဖို့ အခုလို ကြိုတင်လေ့လာထားသင့်ပါကြောင်း
အသေးစိတ် ရှင်းပြသမို့ ကျေးဇူးပါ နွေဦးရေ။
Output အထုတ် အကြောင်း အပြီး ဒီတစ်ခါ Input အသွင်းပေါ့။
ဒါကြောင့်မို့ တစ်ချို့ ကြုံဖူးသူတွေ ညည်းတာ။
အဲလိုပွဲသွားရတာ အစာ ဘယ်တော့မှ မဝ ဘဲ အိမ်ရောက်မှ ထပ်စားရသတဲ့။
ဒါကြောင့် ပကာသန ဆိုတာ ဟန်လုပ်ဖို့ကလွဲလို့ မဟန် ပါဘူး။
ကပေါက်ပြောသလို Pretty Woman မှာ လဲ စားသောက်နည်း ကို သင်ပေးတာပါတယ်။
မင်းသမီး မိန်းမပျက်လေး ကို ပွဲတိုးအောင် ပေါ့။
တကယ်လဲ စားတော့ ပေါက်ကရတွေဖြစ်တာပါဘဲ။
အရီးလတ်ပြောသလို Output ပြီးတော့ Input အကြောင်းပေါ့ နောင် ဘာရေးရမဠဲလို့စဉ်းစားမိသွားလို့ ကျေးဇူးပါ ။
ကျုပ်တို့ရွာအလှူတွေမှာတော့ ထမင်းစားရုံထဲသွား အပေါက်ဝကလက်ဆေးခဲ့
ထမင်းဝိုင်းမှာ ဟင်းတွေ အလုအယက်ခပ်စား၊ ကုန်ရင်လိုက်ပွဲတောင်း
ဗိုက်ဖောင်းတော့ အိမ်ပြန်.. ဒါပဲ
ဦးပါရဲ့ ၀ါဆိုထမင်းကိုတောင် သတိရသွားပြီ။
အဲလို စားရတာကို သဘောကျသလို…….
ဒီလိုလည်း စားတတ်ချင်သေးတယ်။ :harr:
မလွယ်ပါဝူးဗျာ။ ဘယ်သန်တွေအတွက်တော့ ခြွင်းချက်လေးတွေ ရှိမယ်ထင်ပ
အော် ..ရွှေအိ က ဘယ်သန်လား…
ထမင်းစားပွဲမှာတော့ ဘယ်သန်တွေအတွက် သီးသန့်အခွင့်အရေးမရှိပါဘူး။အားလုံးတပုံစံထဲဘဲ စားကြပါတယ် ။
အဲ..လူ့အခွင့်အရေး တောင်းဆိုခြင်သပဆို တောင်းဆိုခွင့်ရှိပါတယ်နော်…
တကယ့်ကို အကျိုးရှိစေတဲ့ပိုစ့်လေးပါ ။
မြန်မာထမင်းဟင်း.. ငပိရည်..တို့စရာစားနည်း.. စုပေါင်းပြုစုထုတ်ပြန်ဖို့ကောင်းတယ်..
တို့စရာကို.. ညာလက်နှင့်ကိုင်၍.. ငပိရည်ခွက်ထဲ.. ကိုင်ထားသောတို့စရာ၏ ၄ပုံ၁ပုံသာနှစ်ပါ..။
တို့စရာကို.. လက်ယာရစ်အတိုင်း.. တခုချင်းစီသာယူရန်..။
အသာအယာ.. ဘယ်လက်နှင့်ဟင်းချိုခွက်လှမ်းယူပြီး.. ဘယ်လက်နှင့်ပင်.. ဇွန်းကိုင်ခပ်သောက်ပါ..
လက်နှင့် မစားးခင်လက်ဆေးရန်ဇလုံမှာ.. ညာဖက်တွင်ရှိသောရေဇလုံဖြစ်ပြီး.. စားပြီးလျှင်.. ဘယ်ဖက်တွင်ချထားသော ရေဇလုံတွင်လက်ဆေးပါ..။ ပြီးလျှင်လက်ပြ၍..စားပွဲထိုးကို.. ချက်ချင်းသိမ်းခိုင်းပါ..။ ( ဘေးဘယ်ဖက်ရှိသူမှ.. လက်ဆေးရေကို.. ဟင်းချိုနှင့်မမှားစေရန်ဖြစ်သည်)
ကျွန်တော်လဲ မြန်မာ့ရိုးရာ ထမင်းဝိုင်းအတွက် မှီငြမ်း စာတွေရှာနေပါတယ် ။ လောလောဆယ်တော့ သူကြီးပြောတဲ့စနစ်တွေကိုဘဲမှီငြမ်းရမှာ..။ စာနဲ့ပေနဲ့ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ကတော့ လူ့ကျင့်ဝတ်မှာ မတွေ့ရသေးဘူး ။
ရဟန်းကျင့်ဝတ်သိက္ခာတွေမှာတော့ အတော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိတာတွေပါတယ်။ဒါတွေကိုဘဲ မြန်မာတွေက ကျင့်ဝတ်အနေနဲ့ သတ်မှတ်သုံးစွဲသလားဘဲ ။ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်က အဖိုးအဖွားတွေ သင်ပေးခဲ့တာတွေက အဲသည်ထဲက နည်းတွေနဲ့အတော်များများတူနေတာ တွေ့ရပါတယ် ။ အဲဒါကိုဘဲ မြန်မာ့ရိုးရာ ဆိုပြီးလုပ်ရမလားလို့…
ကျုပ်ပြောချင်တာတော့ အစာစားတဲ့အခါ တခွီးခွီးနဲ့ မာန်ဖီမစားကြဖို့ပါ။ အချင်းချင်း စားမာန် မခုတ်ဘဲ ကိုယ့်ပန်းကန်နဲ့ကိုယ် စားစေလိုပါတယ်။ အကယ်၍ လူလစ်ရင်တော့ မီးဖိုချောင်ထဲက ငါးခြောက်ပြား အသားဟင်း စတာတွေကို ဦးရာကြောင်စနစ်နဲ့ အလစ်သုတ်နိုင်ပြီး အသံမမြည်အောင်တော့ ကိုယ့်တာကိုယ်လုံကြဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။…
အစားဆိုတာနဲ့ ၀င်အားပေးသွားပါတယ် … ဒါပေမယ့် ဗိုက်မ၀လိုက်ဘူး …
ဗဟုသုတအနေနဲ့ သိမ်းထားလိုက်တယ် …